Uchungechunge lwengalo yokuphakamisa lunezinzuzo zokwakheka okuhlanganisiwe, kusetshenziswa uhlobo olusha lwensimbi esezingeni eliphakeme, amandla aphezulu, isisindo esincane, ukufinyelela okuqondile kumandla we-AC ukuqala, ukusetha ngokushesha, izinyawo zokusekelwa kwe-hydraulic okuzenzakalelayo, kungasetha ngokushesha kuphephile futhi ukusebenza okulula. Itafula elisebenzayo lingaphakanyiswa futhi ubude besandiso obuningi bukhulu, futhi indawo yokusebenza iyanda; nengxenyekazi ingazungeziswa. Kulula ukuwela izithiyo futhi ufinyelele endaweni yokusebenza, iyithuluzi elifanele lokukhuphuka. Izinto zokuhamba zilula, i-trailer esheshayo eqondile, isivinini se-trailer sifinyelela ku-90km / h.
(1) Uhlobo olusha lwe-chassis ezizimele ngokugcwele. Imoto yesikhulumi esisebenza ngokuzimela esinamalungelo empahla yengqondo ezizimele ngokuphelele yenziwe. Yamukela ubuchwepheshe bokuhlanganiswa kwe-electro-mechanical-hydraulic, ukwakheka kokwethenjelwa nokuklanywa okusizwa ngamakhompiyutha, futhi yathuthukisa ngempumelelo idrayivu ye-hydraulic ngokuphelele, i-chassis ekhethekile ezisebenzelayo, okuyintuthuko esedlule. Amaloli asepulatifomu asekhaya asemsebenzini angasebenza kuphela ekuvinjelweni kwemiklamo yokuguqulwa kwemoto noma crane chassis.
(2) Ukushayela ngomthwalo nokuzinza okuhle kokusebenza. Isakhiwo se-chassis sinqamula emibonweni nezindlela zokwakha zendabuko, futhi sinciphisa ukuphambuka kwesikhungo samandla adonsela phansi ngokwandisa ukwakheka okuphelele nokusatshalaliswa komthwalo wesikhulumi sokugibela. Isakhiwo sephuzu le-hinge eliyindilinga elihlukile eliyingqayizivele liyamukelwa, futhi izinhlobo ezahlukahlukene zamamojula we-counterweight zisethwe ngokufanelekile ukuze zilinganise kahle i-torque esebenzayo. Ukusetshenziswa kohlaka olubunjiwe lwe-H olumise okwe-H olwehlukanisiwe lwebhokisi lokugoba ibhokisi kanye namathayi werabha aqinile alayishwa kakhulu kukhulisa ukuqina kwento yonke ye-chassis, ukuqinisekisa ukuzinza komshini wonke nenqubo yokusebenza, nokubona ukusebenza komsebenzi wasemoyeni imoto yesikhulumi enomthwalo.
(3) Idivayisi yokusebenza enezinhlobonhlobo nezinhlobonhlobo. Ngokusebenzisa ubakaki wangaphambili we-boom, ungafaka ngokushesha insimbi yokuphakamisa noma ipulatifomu enesipiliyoni ukuze ubone imisebenzi yokuphakamisa izinto ezibonakalayo, ukuphakamisa nokuphakamisa imisebenzi ephezulu. Ngasikhathi sinye, inikeza isikhombimsebenzisi sokunwetshwa kwensiza yokusebenza kanye nokushintshwa okusheshayo kwamadivayisi ahlukahlukene asebenzayo.
(4) Idivayisi yokuphakamisa eyehlukile enezinhlangothi ezintathu. Idizayini yokuphakamisa ezungeza kathathu ayikwazi ukugcina ngokuzenzakalela ukuma kwento ephakanyiswayo, kepha futhi ibuye ibone izidingo zokulungiswa kwanoma yikuphi ukuphakama, isikhundla nokuqondiswa kwento ephakanyisiwe esikhaleni. Ukulawulwa kwejubane kunembile futhi kuyazwela, futhi ukusebenza kokunyakaza okuncane kuhle. Ihlangabezana nezidingo zokusebenza okuphezulu nokuphakama kwemigwaqo yokungenisa umoya emihumeni emikhulu.
Langaphambilini Ipulatifomu yomsebenzi wezingalo ezigobekayo ezizimele
Olandelayo: Phakamisa isigaba
I-China ibhalwe nge-Boom Lift
I-China Icacisa I-Boom Lift
China Boom Phakamisa
I-China Drivable Boom Lift
China Electric Boom Phakamisa
I-China Towable Boom Lift